Tins အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့မယားစကား - ချက်ပြုတ်နည်းများဘီစကစ်မုန့်, ​​ချောကလက်နဲ့ချိစ်မုန့်စိမ်း
tins အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့မယားစကား - တစ်ဦးချင်းစီကမိသားစုအတွက်ဖြစ်သင့်ကြောင်းချက်ပြုတ်နည်းများ။ - စက္ကူဆီလီကွန်, သတ္တုသို့မဟုတ်အလွန်အဆင်ပြေ: ကွဲပြားခြားနားသောစွမ်းရည်နှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှအသေးစားအားရစရာတူသောဖုတ်။ သငျသညျနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလက်ဖက်အသစ်အချိုပွဲနှင့်အတူအိမ်မွေ့လျော်ဖို့နိုငျအားရစရာထုတ်လုပ်များအတွက်သင့်လျော်သောနည်းလမ်းရွေးချယ်ရာတွင်အားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်မှာ tins အတွက်မဆိုမယားစကားချက်ပြုတ်နည်းများအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကျူးလွန်ဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူး, အဓိကအသုံးပြုမှုကိုအရည်အသွေးကိုထုတ်ကုန်များနှင့်အသေးစိတ်အကြံပြုချက်များအတိုင်းလိုက်နာ။
ပင်ကိုအများဆုံး "ပြင်းထန်သော" စမ်းသပ်ကိုင်ထားစဉ် tins အတွက်ကိတ်မုန့်ဘို့မုန့်စိမ်းညာဘက်ဘီစကစ်မုန့်, ​​kefir သို့မဟုတ်ဂန္ရေနံ, ပုံစံရှိနိုင်ပါသည်။
ဆီလီကွန်0မိနစ်က 25 မှ 35 မိနစ်, 20 မှ 25 မိနစ်ကနေသတ္တု၌ဖုတ်: ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံ, အရွယ်အစား, 5cm အောက်ခြေအတွက်ကိတ်မုန့်ဖုတ်၏အချိန်စဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါသည်။
စက္ကူပုံစံများတွင်မီးဖို၌မီးဖိုနိုင်ပါတယ်မဟုတ် muffins သတ္တုကွန်တိန်နာ, ဘဲ, သူတို့က, Podgora ပုံပျက်သောဖြစ်ကြပြီးဖြစ်နိုင်သည်မုန့်စိမ်း "ပြေး။ "
မယားစကားမုန့်ဖုတ်အချိန်ငယ်များစွမ်းရည်များအသုံးပြုခြင်းနှင့် 5-7 မိနစ်ချက်ပြုတ်အချိန်ကိုလျှော့ချရန်လိုအပ်ကြောင်းလျှင်, ပုံစံ၏အရွယ်အစားပေါ်တွင်လုံးဝမူတည်ပါသည်။
သငျသညျဆီလီကွန်မှို, စက္ကူသို့မဟုတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်သတ္တုမြင့်တက်အတွက်ခြုံငုံကျယ်ဝန်သော, ရေမြှုပ် muffins ½မှပုံစံများကိုဖြည့်စွက်ပေးနိုင်သည်။
သံမှိုအတွက် muffins စာရွက်
ရှေးဟောင်းစာရွက်ကနေပိုကောင်းတဲ့ချက်ပြုတ်ဖို့မီးဖိုတဖို၌ tins အတွက်ဂန္ထဝင်ကိတ်မုန့်, မုန့်စိမ်းစပျစ်သီးပျဉ်မှဖြည့်စွက်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အခြောက်လှန်းအသီးအပွရမ်အတွက် pre-စိမ်ရန်လိုအပ်ပါတယ် left ရယူထားသောမြည်းစမ်းဖို့, အရက်ဖုတ်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အငွေ့ပျံမည်, နှင့်မူရင်းအရသာနှင့်အနံ့ရှိနေပါဦးမည်။ အဆိုပါစာရွက် citric အနှစ်သာရပါရှိသည်ဒါပေမယ့် Citrus ခွံ (1 နာရီ။ အယ်လ်) ကိုအစားထိုးနိုင်ပါတယ်
မာဂျ - 200 ဂရမ်;
citric အနှစ်သာရ - ½ Tsp ။ , ။
မုန့်ညက် - 300 ဂရမ်;
ဆား - 1 ဖြစ်တော့;
စပျစ်သီးပျဉ် - 200 ဂရမ်;
ရမ် - 150 ml ကို။
အဆိုပါရမ်နှင့်အတူစပျစ်သီးပျဉ်တွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်, မုန့်စိမ်းသို့အခြောက်လှန်းအသီးဆမ်း, အနှစ်သာရ add, အမှုန့်နှင့်ဆားဖုတ်။
မုန့်ညက် Vsyp, မုန့်စိမ်းလွန်းပါးလွှာမဟုတ်ပါဘူးသော့ပွငျ။
ပုံစံများကိုဖြန့်ဝေ, 180 ဒီဂရီမှာ 30 မိနစ်ဖုတ်။
စက္ကူမှိုအတွက်ရိုးရှင်းတဲ့မယားစကားဖုတ်, ချက်ပြုတ်နည်းများမလိုအပ်ပါဘူး, ရိုးရှင်းစွာပါဝင်ပစ္စည်းများရောမွှေ, မည်သည့်အခွံမာသီး, သီးသို့မဟုတ်လိုက်သည်ကိုသီးသောအသီးများကပိုမိုပြည့်စုံစေရန်, ဆန္ဒရှိလျှင်သူတို့ကိုဖန်တီးရန်ကိုကိုးနဲ့ချောကလက် muffins ၏ Citrus အရသာသို့မဟုတ်အမျိုးအစားနှင့်ဖွဲ့နိုင်ပါတယ်။ သေချာပေါက်သတ္တုမှို၏မျက်မှောက်၌သင့်လျော်သောအရွယ်အစားရှိရမည်, သူတို့ကမုန့်စိမ်းသို့သွန်းလောင်းသောအလောင်းတော်ထားစက္ကူ preform ဖြစ်ကြသည်။
ထောပတ် - 150 ဂရမ်;
မုန့်ညက် - 200 ဂရမ်;
သံပုရာ zest - 1 tbsp ။ ဌ။
သံပုရာဖျော်ရည်ကို - 50 ml ကို;
မုန့်ဖုတ်အမှုန့်, vanilla ။
သကြား, သံပုရာ zest ဝင်, ဖျော်ရည်နှင့် vanilla နှင့်အတူကြက်ဥရိုက်တယ်။
ပျော့ပျောင်းသောထောပတ် Add, မုန့်ဖုတ်အမှုန့်နှင့်အတူမုန့်ညက်ထည့်ပါ။
190 ဒီဂရီမှာ 25 မိနစ်စက္ကူ tins အတွက် muffins ဖုတ်။
ဆီလီကွန်မှိုအတွက် muffins အဘို့အကြော်
ချက်ပြုတ်နည်းများရှုပ်ထွေးသို့မဟုတ်ခက်ခဲအစိတ်အပိုင်းများများ၏များအပြင်လိုအပ်မထားတဲ့ tins အတွက်အရိုးရှင်းဆုံးမယားစကား။ ဆီလီကွန်များအသုံးပြုမှုကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှကပ်မထားဘူး, ရေနံနှင့်ခဲဖွယ်စားဖွယ်ချော၏နောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးအလွန်ကောင်းစွာတတ်ရှင်းလင်းစေပါတယ်။ ဤသည်ဂျမုန့်ဖုတ် candied သတိပြုဖွယ်များအပြင်ဖြစ်ပါသည်, icing သို့မဟုတ် topping မပါဘဲရောင်စုံသေးငယ်တဲ့အပိုငျးပိုငျးကိုရှေးခယျြရမညျဖွစျသညျ။
ရေနံ 82% - 200 ဂရမ်;
candied - 1 tbsp; ။
2-3 tbsp - ဖြန်းဆွတ်ဘို့ကြံသကြား။ l ။
သကြားနှင့်အတူကြက်ဥ Beat, အပျော့ပြောင်းထောပတ်နှင့်မုန့်ဖုတ်အမှုန့်ထည့်ပါ။
သကြားလုံးအသီး Enter, မုန့်ညက်ကိုငါသွန်းလောင်းမုန့်စိမ်းကိုအနည်းငယ်ကြဲကြဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆီလီကွန်မှိုအတွက် muffins 200 ဒီဂရီမှာ 20 မိနစ်ဖုတ်ရမည်။
တစ်ဦး delightfully ပျော့ရရှိသောသာမန်ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏အစုံ, တိကျစွာအားလုံးအိမ်ပြန်ချိုမြိန်သွားအကဲဖြတ်ရန်ကြောင့်အနည်းငယ် crumbly ရယူထားသော: မီးဖို tins ထူးခြားတဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်အတွက်ဒီရိုးရှင်းတဲ့ muffins ။ အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ၏စိတ်နှလုံးကိုအသုံးပြုသည်မှာက glaze ခြင်းမရှိဘဲ, ရိုးရှင်းသော granular ထုတ်ကုန်များနှင့်မွှေးသားသမီးရဲ့မုန်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ထောပတ် - 250 ဂရမ်;
မုန့်ညက် - 250 ဂရမ်;
ရေနံ - 100 ဂရမ်
သကြားနှင့် vanilla နှင့်အတူကြက်ဥရိုက်တယ်။
အဆိုပါအရည်ပျော်မှု Enter နဲ့ထောပတ်အအေး, မုန့်ဖုတ်အမှုန့်နှင့်ဒိန်ခဲထည့်ပါ။
Vsyp မုန့်ညက်, မုန့်စိမ်းကြဲကြဲသော့ပွငျ။
190 ဒီဂရီမှာရွှေမျက်နှာပြင်သည်အထိအကြောင်း 25 မိနစ်ဖုတ်ပုံစံများ, ဖြန့်ဝေ။
အများအပြားစားဖိုမှူး, လတ်ဆတ်သောအနံ့နှင့်အရသာတူသော tins အတွက်၏ Citrus စာရွက်ကိတ်မုန့်အိမ်လုပ်ကိတ်မုန့်တည်းဟူသော inveterate ရန်သူများကိုအောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အမွှေးနံ့သာများလိမ္မော်ရောင်အရသာဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်အရာ, ထို vanillin ၏လုံလောက်စွာမယ့်, ဘာမှထပ်ထည့်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ သင်ကအဖြူခွံမုန့်စိမ်းတယ်မရှိသေးပေ, တကခါးသောအရသာရယူထားသောငါပေးမည်သေချာအောင်, လိမ္မော်ရောင်အခွံကိုသုံးပါရှိရပါမည်။
လိမ္မော်ရောင်အခွံ - 1 tbsp ။ ဌ။
ပျော့ဖတ်နှင့်အတူလိမ္မော်သီးဖျော်ရည် - 100 ml ကို;
အရည်ကျိုထောပတ် - 100 ml ကို။
အမှုန့်နှင့် vanilla ဖုတ်, zest ထည့်ပါ။
မုန့်ညက် Add တစ်ချောမွေ့, စိမ်း-အခမဲ့ Battery ကိုအသော့ပွငျ။
ပုံစံများကိုဖြန့်ဝေ, 190 ဒီဂရီမှာ 20 မိနစ်ဖုတ်ရမည်။
tins အတွက်နို့နှင့်အတူ muffins
ချက်ပြုတ် နို့နှင့်အတူ muffins ဆီလီကွန်မှိုထဲမှာမတိုင်းစားဖိုမှူး, အထူးသဖြင့်ရင်သားကင်ဆာကိုစမ်းသပ်ပျော့နှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သည် - ဖုတ်အခါကြမ်းတမ်းဖြစ်လာသည်။ အိမ်ရှိပါလျှင်ကျရှုံးခြင်း, အလွန်အဆီနို့ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်ရှောင်ကြဉ်ပါ, ကအနုပညာ½ထက်ပိုအများကြီးမလိုအပ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူး။ မယားစကားဝေမျှများ (12 PCs ။ ) ချက်ပြုတ်ဘို့။
ပျော့ပျောင်းသောရေနံ - 200 ဂရမ်;
ဘိန်း - ½ st ။
ဖြူဥများနှင့်သကြားထ Beat ဆီကိုရိုက်ထည့်ရန်, ထို့နောက်နို့။
အဆိုပါ vanilla, မုန့်ဖုတ်အမှုန့်, ဘိန်းမျိုးစေ့ကိုသွန်းလောင်း။
ပုံစံများကိုဖြန့်ဝေ, 200 ဒီဂရီမှာ 25 မိနစ်ဖုတ်ရမည်။
tins အတွက် kefir နှင့်အတူ muffins
ကိတ်မုန့်အဘို့အဒိန်ချဉ်အပေါ်မုန့်စိမ်း တစ်ဆလိုက်နှင့်တကွ, အစအနတစ်ဦးစိမ်းလန်းစိုပြေမှုများနှင့်ဖုတ်မျက်နှာပြင် crack နိုငျသောအခါအချိုပွဲပေးအလှဆင်, glaze ချက်ပြုတ်နေစဉ်အတွင်းဥပမာ, ကောင်းစွာရယူထားသော impregnate နှင့်လုပ်မိလျှင်, သာအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်: tins တစ်ဦးအနည်းကိန်းရှိပါတယ် juicier ။
kefir - 150 ml ကို;
ဖုတ်အမှုန့်, vanilla သကြား,
နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရအခွံမာသီးများအရောအနှော - 1 tbsp ။
ကြက်ဥ, သကြား, vanilla နှင့်မုန့်ဖုတ်အမှုန့်ရိုက်တယ်။
ပုံစံများကိုဖြန့်ဝေ, 190 ဒီဂရီမှာ 25 မိနစ်ဖုတ်ရမည်။
စံပြရေမြှုပ်ကိတ်မုန့် စက္ကူမှိုထဲမှာ - ချောကလက်။ ထိုကဲ့သို့သောမှိုများအသုံးပြုမှုအရသာမှာညစ်ပတ်သင့်လက်မရရန်ကူညီပေးသည်။ အနက်ရောင်ခိုင်မာတဲ့စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်ကော်ဖီ, ပျော်ဝင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ရေပွက်ပွက်ဆူနေသော၏ 50 ml စေခြင်းငှါထည့်သွင်း, ကိုကိုးအရသာတိုးမွှငျ့ပါလိမ့်မယ်။ ခြောက်သွေ့တဲ့အလုပ်မဆက်ဆံဖို့, မုန့်စိမ်းမုန့်ညက်၏အစိတ်အပိုင်းအစားထိုး, ကိုကိုးမိတ်ဆက်သည်။
ပျော့ပျောင်းသောထောပတ် - 150 ဂရမ်;
မုန့်ညက် - 150 ဂရမ်;
ကိုကိုးအမှုန့် -4tbsp ။ ဌ။
ချက်ချင်းကော်ဖီ -; ။ ဌ 1 ဇ။
ပွက်ပွက်ဆူနေသောရေ - 50 ml ကို;
tins နှင့်မုန့်ဖုတ်ကိတ်မုန့် 190 ဒီဂရီမှာ 20 မိနစ်သို့ Battery ကိုသွန်းလောင်း။
tins အတွက်သီးနှင့်အတူ muffins
A ကောင်းဆုံး မီးဖို၌မယားစကားများအတွက်စာရွက် ကွပ်မျက်နှင့်ထုတ်ကုန်၏သေးငယ်တဲ့အစု၏တစ်ခါတလေစားဖိုမှူးရိုးရှင်းများကဲ့သို့သေးငယ်တဲ့သီး၏ထို့အပြင်နှင့်အတူ tins ၌တည်၏။ Berries ပါလတ်ဆတ်အေးခဲနှစ်ဦးစလုံးသုံးနိုငျ, အဆုံးစွန်သော, ဒီအတိုင်းအရည်ပျော်အောင်ခြောက်သွေ့စီဓါတ်နှင့်အတူဖြန်းဖို့ကနျြရစျသငျ့တယျ, ဒါသူတို့လျော့နည်းသီးဖျော်ရည်များနှင့်စေား propechetsya လွှတ်လိုက်ပါ။
သံပုရာအခွံ - 1 Tsp ။ , ။
သေးငယ်တဲ့သီး - 1 tbsp ။
အဆိုပါထောပတ်, သကြား, ကြက်ဥရိုက်တယ်။
vanilla, မုန့်ဖုတ်အမှုန့်, မုန့်ညက်ထည့်ပါ။
ခြောက်သွေ့ berry သီးရောနှောပစ်။
190 ဒီဂရီမှာ 20-30 မိနစ်ခန့်ဖုတ်။ သစ်သား skewer စစ်ဆေးလိုလိုလားလား။
အအောင်မြင်ဆုံးစာရွက်ဆကျဆံ - အချဉ်မုန့်နှင့်အတူသငျသညျထိုအပွငျဆငျနိုငျ စပျစ်သီးပျဉ်နှင့်အတူ muffins , tins အခြားအခြောက်အသီး, candied အသီး, အခွံမာသီးသို့မဟုတ်ဘိန်းမျိုးစေ့များထည့်ပါ။ ခဲဘွယ်စားဘွယ်၏တစ်ဦးကထူးခြားတဲ့ feature ကိုဒဏ်ငွေ-ပေါက်နှင့်အနည်းငယ် vlazhnovatoy အစအန, လေဖြစ်ပါသည်, ကမုန့်ညက်တွေအများကြီးငါသွန်းလောင်းရန်မဟုတ်, မုန့်စိမ်းတစ်ဇွန်းထဲကနေယို၏အထူအလွှာဖြစ်သင့်အရေးကြီးပါသည်။
အချဉ်မုန့် - ½ st; ။
အရည်ကျိုထောပတ် - 150 ml ကို;
ကြက်ဥ, သကြား, ထောပတ်ရိုက်တယ်။
ချဉ်မုန့်, မုန့်ဖုတ်အမှုန့်, ထိုမုန့်ညက်ထည့်ပါ။
tins အတွက်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ရွှေမျက်နှာပြင်သည်အထိ 190 ဒီဂရီမှာ 20 မိနစ်ဖုတ်ရမည်။
အိမ်တွင် Marzipan - စာရွက်
ရည်ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်ပါ - စာရွက်
ရှည်လျားသော cookies တွေကို
ငါးပိ - အမျိုးမျိုးသောအသီးအပွထံမှအရသာချိုချဉ်အဘို့အချက်ပြုတ်နည်းများ
ဘယ်လိုအိမ်မှာထင်းဖုတ်ဖို့ - စာရွက်
အဆိုပါ bronchi ရှင်းလင်းရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
တိုက်ခန်းတစ်ခန်းတစ် floorboard ရွေးချယ်ဖို့ကိုဘယ်လို - အောင်မြင်သောဝယ်ယူမှုအတွက်အသုံးဝင်သောအကြံပေးချက်များ
အဘယျအကြော် guppies အစာကျွေးသလော
ဘုရားသခင်၏မိခင်များ၏ Semistrelnaya အိုင်ကွန်ကိုကူညီပေးပါသောအရာကို မှစ. ?
Mussels နှင့်အတူသုပ် - စာရွက်
ဂရိစတိုင်စားဆင်ယင် - ရှေးခေတ်ဝတ်စုံတစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်အနက်
နယူးတော်လှန်ရေးသမား Atkins အစားအသောက်များတွင်